फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - सम्मान–अभिनन्दन संस्कृति राष्ट्रिय अभियान
सम्मान–अभिनन्दन संस्कृति राष्ट्रिय अभियान डा. खगेन्द्र लुइँटेल
हामीकहाँ थरीथरीका हावा चल्न खास मौसम चाहिँदैन । बेमौसमी करतुत भन्दा बेजोडले चल्ने बेमौसमी हावाको महिमै अलग छ । उहिले देखि नै एक न एक प्रकारको बेमौसमी हावा चलाउन हामी विश्वमै नामी जाति नेपाली । एकीकरणदेखि नै अनेक पर्व, काण्ड–उपकाण्डरूपी संस्कृति रच्दै–रचाउँदै अगि बढेका हामीले पजेरो संस्कृति, सांसद खरिदबिक्री संस्कृति, रातो पासपोर्ट बिक्री संस्कृति आदि अनेकौँ बेमौसमी हावा कति बेर्होयौ कति ? यस्ता कतिपय हावा बन्दको त कुरै छोडौँ मन्द हुनेसमेत छाँट देखिँदैन । एकपछि अर्को झन् नौलो नौलो बान्कीमा देखापर्दाे छ, फैलिँदो छ । वर्तमानमा चल्ने बेमौसमी हावामध्ये सम्मान–अभिनन्दन र हावादारी भाषण संस्कृतिको हावा सुनामीभन्दा पनि बेजोड छ । यसले सामान्य हावाको स्तर पार गरी हुरी बतास र आधीबेरीकै रूप लिइसकेको छ, केके बिघ्न गरेर मत्थर हुने हो टुङ्गो छैन ।
आयोजकलाई पनि समस्यै छ । उम्रेदेखि खुम्रेसम्मका सबै दलेलाई मन्चासन गराउनुपर्ने नत्र त्यहीँ उठेर ठोक्लान् भन्ने डर‘। मन्चासन पनि सुरुमा एक पटक हो र सभा विसर्जन गरुन्जेल निरन्तर‘ । फेरि सबैलाई कन्ठेलगौटी लाइदिनै पर्ने । आसन ग्रहण गराउँदा गराउँदै दर्शकदीर्घा खाली‘ श्रोताभन्दा वक्ता बढी‘ । उपरखुट्टी लाएर बस्दा उत्तर आधुनिक फेसनका कारण झारपात देखिएको पनि पत्तो पाउँदैनन् । दर्शकदीर्घा खाली हुनाले मात्र हो नत्र त‘ ।
आफ्नै माला, आफ्नै दोसल्ला र आफ्नै खर्चमा आफ्नै सम्मान–अभिनन्दन गराउने परिपाटी वर्तमान प्रदूषणको चरम रूप हो । उहिले सामाजिक–सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने दोसल्लाको अहिले अर्थ र क्षेत्र मात्र होइन व्यापार पनि विस्तार भएको छ । एक थान माला, एक थान प्रशस्तिपत्र र एक थान दोसल्ला झोलामा हालेर हिँड्यो, दुईचार धतुरे भेला गरायो, कसैलाई प्रमुख अतिथि बनायो, माला लगाउन लगायो, आफै थपडी बजायो बस भइहाल्यो सम्मान–अभिनन्दन । कतै दुईचार मनुवा जम्मा भएका ठाउँमा सँगै लगेका भाडाको धुपौरेलाई उद्घोषण गरायो, अर्को भरौटेलाई भाडाको थोत्रै भए पनि क्यामरा तेस्र्याएर दुईचार कुरा सोध्न लगायो, मौका परे टिभी सिभीमा पनि देखाउन लगायो, मख्ख र्पयो, जाँड खायो, तरुनी जिस्क्यायो सुत्यो बस । त्यति पनि भएन भने कतै बसबाट खुत्रुक्क ओर्लियो, यताउति पल्याक पुलुक र्हेयो, झोलाबाट माला झिक्यो, आफ्नो माला आफ्नै गलामा र्भियो । सम्मानपत्रको फ्रेम हातमा बोक्यो, अनि यताउता हेर्दै दारा ङिच्याउदै मख्ख पर्दै हिँड्यो । कुनै कोरलीको नजर आफूतिर परे जुनी नै सफल भएको ठान्यो । अहिले एकथरीको दिनचर्या र पेसा नै यस्तै छ ।
अहिले भाडाको हलमा भाडाको प्रमुख अतिथि, भाडाकै माला, भाडाकै दोसल्ला, भाडाकै सम्मानपत्र, भाडाकै वक्ता र भाडाकै श्रोताबाट पनि काम चलाउन थालिसकिएको छ । प्रायोजित रूपमा दुईचार जना मिलेर पालैपालो आदानप्रदान गर्ने सम्मान–अभिनन्दनको चर्तिकला झनै अर्कै हुन्छ । यसखाले सम्मानमा त एउटै दोसल्ला र फ्रेमले सबैको पालो र्पुयाइन्छ । यस्ता कतिपय त तपाईँले पनि देखेर, सुनेर वा भोगेरै अनुभव गरेकै हुनुपर्छ, सबै भनेर साध्य पनि छैन । केहीचाहिँ नभनी नहुने खालका भएकाले भन्नु जरुरी छ ।
जे जसो भए पनि सम्मान भन्ने बित्तिकै जसलाई पनि लोभ लागिहाल्दो रहेछ । लम्बु रविदेखि पुड्का कविसम्म सब सम्मान ग्रहण गर्न र गराउन लम्पट देखिन्छन् । वास्तवमा सम्मान, अभिनन्दन, प्रशंसा मन पराउनु मानवीय स्वभाव नै हो, आवश्यकता र योगदान अनुसार नगरिन हुने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । वास्तविक योगदानका आधारमा गरिने सम्मान राम्रो पनि हो तर सम्पूर्ण आफ्नै खर्चमा गराइने प्रायोजित सम्मान–अभिनन्दन चाहिँ आत्मरतिमा रमाउने हरिलट्ठकहरूका लागि मात्र उपयुक्त होला, आम रूपमा त्यसको कुनै अर्थ छैन । कसैको बिहे हुँदा पनि सम्मान, सन्तान जन्मिदा पनि सम्मान, सानोतिनो केही भए पनि सम्मान, केही गराउनु परे पनि सम्मान, सिङ उम्रिदा पनि सम्मान, झर्दा पनि सम्मान‘ । यसर्थ अब यसको प्रचलित परिभाषा नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । सम्मान–अभिनन्दन समारोहमा यसो मौका र्पयो कि केही न केही विमोचन पनि गरिहालिन्छ । अहिले सम्मान–अभिनन्दन बदमासी लुकाउने लाइसेन्स बनेको छ । यसरी जताततै गरिने सम्मानबाट यस देशमा उत्तम मान्छेको सङ्ख्या अधिक छ भन्ने निष्कर्ष आउँछ तर त्यसो भएको भए यस्तो खत्तम स्थिति नआउनु पर्ने हो । अब कुरो मेरो बुझाइको पहुँचबाट बाहिर गइसकेको छ ।
हालसालकै कुरा हो, एक जना मित्रले तपाईँ कविताको विशेषज्ञ आदि इत्यादि भन्दै धेरै अनुनय विनय गरी एउटा कवि सम्मेलनमा आमन्त्रण गरे । त्यहाँ सम्मान कार्यक्रम भएको पनि अवगत गराए । आफ्नो बायोडाटामा एउटा सम्मान थपिने लोभले म त्यस कार्यक्रममा गए । त्यो कार्यक्रम साच्चिकै बयान गर्न लायक थियो । तिथि निधो गरेका तर थिति निधो नगरेका प्रमुख अतिथि समयमा नआइपुग्दा कार्यक्रम ढिलियो । उनी नआएपछि मैलाई निमित्त प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम थालियो । त्यस कार्यक्रमको पुरै प्रायोजन एक धनाढ्यले गरिदिएको रहेछ, सर्वप्रथम उसैले किनेको माला र चदुवा उसैका गलामा भिराएर मैले उसको सम्मान गरेँ । त्यसपछि ऊबाट म निमित्त प्रमुख अतिथि पनि सम्मानित भए । पालैपालो सम्मान ग्रहण हुँदै गयो । मायाको चिनु भन्दै एउटा ठेउको पनि बाँडियो । त्यसपछि क्रमशः आयोजक समितिका पदाधिकारीहरू सम्मानित भए । उद्घोषक स्वयंले पनि अनेक विशेषणका साथ आफ्नै नाम उद्घोषण गरी मबाटै सम्मान ग्रहण गरिन् । उनीसँग गला मिलाउँदा कति मज्जा आयो त्यसको बयान गर्नै गारो छ । त्यस कार्यक्रममा एउटा मायाको चिनु तीन–चारजनालाई समेत र्पुयाइयो । यो सम्मान कि अपमान हो ठम्याउन नसकी यसको पुरानो परिभाषा नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै म घर फर्किए ।
अहिले सम्मान पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अञ्चलीय, जिल्लीय, टोलीय, घरीय, आवासीय, गैरआवासीय आदि अनेक ढप र ढाँचाका अनि सम्मानका प्रकार पनि अनेक हुन थालेका छन् । खास्टो सम्मान, मायाको चिनु सम्मान, चदुवा सम्मान, खादा सम्मान, टोपी सम्मान, कट्टु सम्मान, लगौटी सम्मान, दुधौरे सम्मान, सिक्री सम्मान, औँठी सम्मान आदि केके हो केके ? नमरी बाचे कालले साँचे सम्मानका अरू कति भेराइटी देखिने हो यसै जुनीमा कुनै टुङ्गो छैन । यहाँ सम्मान गर्नेले गरिनेलाई र गरिनेले गर्नेलाई समेत चिन्ने अवस्था छैन । प्रायोजित कार्यक्रम चिनेर साध्यै छैन । एउटाका नामको सम्मान अर्कैले लिए पनि कसैलाई पत्तो हुँदैन । एउटै भाखाको सम्मानपत्रमा सयौँ–हजारौको नाम भरी सम्मान–अभिनन्दन गर्ने परिपाटी पनि फस्टाउँदो छ ।
अहिले प्रमुख अतिथिको प्रमुख ठेकेदार म नै भएको छु । मैले नभ्याएका वा खटाएका ठाउँमा मात्र अरूले अवसर पाउँछन् । प्रत्येक दिन माला र गाला त कति जोडिन्छन् कति ? म प्रमुख अतिथि हुन भनेपछि हुरुक्कै हुन्छु, त्यसको एउटा कारण पहिले आफै सम्मान पाइनु भए पनि खास रहस्यचाहिँ अर्कै छ । भन्न त नहुनेथ्यो, तैपनि भैगो सुटुक्क भनिदिन्छु, जे सुकै होस्— त्यो रहस्य हो— कोरलीलाई माला लगाइदिने, हात मिलाउने, धाप मार्ने, काखमा राखेर कानेखुसी गर्ने निहुँले मुख र गाला जुधाउने‘ । त्यस्ता कोरली प्रायः कार्यक्रममा हुन्छन्, नभएका ठाउँमा म धेरै बेर बस्दिन, अर्का ठाउँतिर हुइकिइहाल्छु । तिथि भएको तर थिति नभएकोमध्ये पनि प्रमुख र उमेरले पनि वृद्ध भएपछि जे गरे पनि मलाई कतैबाट छोइछिटो लाग्ने कुरै भएन ।
त्यसको लगत्तैपछि पूर्वेली वा पश्चिमेली युवाहरूको सम्मान हुँदा पनि केस कल्याएर मेरो गौरवमय उपस्थिति भएकै छ र बुलेत्राका टाटाको माला र खास्टो ओढेकै छु । मध्यक्षेत्रमा खर्पने सम्मान पनि छोडेको छैन । ग्रह–विग्रह जेजे भनेर दिएको भए पनि सिसाको फ्रेम हालेका कागज असुल्न म कहिल्यै पछि परेको छैन । जताबाट जसरी जुन क्राइटेरिया राखेर सम्मान कार्यक्रम गरे पनि म छुट्ने कुरै छैन । आफू मात्र हो र यी सबैजसो कार्यक्रममा मेरी प्राण प्यारी कालीमैयालाई पनि सम्मान गराउन पछि परेको छुइन । कालीमैया“लाई काखमा राखेर जहाजमा उडेको छु, मोटरमा गुडेको छु, टाँगामा तानिएको छु, रिक्सामा हानिएको छु ‘ ।
लौ अब भन्नुहोस् त मैले सम्मान–अभिनन्दन नपाएर यसो भनेको हो रैछ त, कहाँ हुनु नि ! मैले सम्मान नपाएर होइन, पाउँदा पाउँदा वाक्क दिक्क भएर यी सब कुरा भनेको हो । श्री पशुपतिनाथ अपमानित हुन थालेका मुलुकमा हामी मनुवा कति दिन सम्मान र अभिनन्दन ग्रहण गर्ने ? यसर्थ हे पशुपति, गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, उत्तरकाली, मध्यकाली यस देशलाई सम्मान रूपी अजीर्ण रोगबाट मुक्ति देऊ, सम्मानलाई वास्तविक ट्य्राकमा ल्याइदेऊ, अब मेरा जति सम्मान कसैलाई नदिलाऊ । प्रमुख अतिथि भएको र सम्मान पाएको मेरो राष्ट्रिय रेकर्ड अरू कसैले तोड्न नसक्ने बनाइदेऊ । कतै कसैबाट मेरो राष्ट्रिय रेकर्ड तोड्न–तोडाउने काम भएमा म त मरिहाल्छु नि । अब एउटा मात्र भए पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय जोडिएको सम्मान दिलाइदेऊ, त्यो ग्रहण गर्न म नर्क लोक जान परे पनि तयार छु ।
एक दिन पशुपति पुगेको मात्र के थिए, त्यहाँ अरू दिनभन्दा भिन्न ढङ्गले बाँदरको जमघट देखेर सुरुमा छक्क परेँ तर म बानी परिसकेको मान्छे, कुरा बुझिहालेँ । त्यहाँ पनि सार्वजनिक सम्मान–अभिनन्दन कार्यक्रम रहेछ । चार पाँच माउ–बच्चा बाँदर–बादर्नी भेला भई यताउता हेर्दै प्रमुख अतिथिको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । प्रमुख अतिथि निर्धा्रित समयभन्दा ढिलो आउने प्रचलन पुर्ख्यौली भएको कुरा त्यस बाँदर अभिनन्दनले पनि देखाउँथ्यो । यत्तिकैमा गौशालातिरबाट एउटा वृद्ध बाँदर हस्याङ्फस्याङ् गर्दै त्यहाँ आइपुग्यो । उपस्थित सब बाँदरले कर्तल ध्वनिका साथ उसको स्वागत गरेपछि थाहा भयो प्रमुख अतिथि त्यही रहेछ । स्वयम्भूमा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरी फर्कँदा ट्राफिक जामका कारण उसलाई त्यहाँ आइपुग्न ढिलो भएको भनिए पनि खास कारणचाहिँ कोरली बादर्नीसंगको मस्का मस्की रहेको कुरा मैले बुझिहालेँ । त्यही बेला एउटी महिला पूजा थाली लिएर मन्दिरतर्फ लम्किँदै थिई, उद्घोषक बादर्नीले बुरुक्क उफ्रेर उसका थालीको माला र गलाको खास्टो तानेर ल्याई । महिला यताउति हेर्दै कराउन नभ्याउँदै त्यो माला र खास्टो वृद्ध प्रमुख अतिथिको करकमलबाट कोरली बादर्नीका गलामा परिसकेको थियो । प्रमुख अतिथि वृद्ध बाँदर र सम्मानित कोरली बादर्नी मुखामुख गरेर दाँत ङिच्याउदै फुत्त उफ्रेर रूखको हाँगामा बसी अङ्कमाल गर्दै थुतुनो र मुतुनु जुधाउने सुर कस्न थाले । त्यो महिला मूक दर्शक भई । सभा विसर्जन भयो । म पनि हिँड ।
अ, यतिखेर बहुचर्चित रहेको केही भरौटेहरूबाट गर्ने–गराइने तथाकथित नेते सम्मान–अभिनन्दनको कुरा त झन्डै बिर्सेको । यो सम्मान–अभिनन्दनमा त झन् दलदलका बिच कसको ठुलो माला भन्ने विचित्रको प्रतिस्पर्धा पो छ त । मालाको तौल पनि किलो, मन हुँदै टन पुगिसक्यो । मालाले नै किचेर मर्लान् भन्ने डर‘। मरिगए त केही थिएन, अलिकति ढुकढुकी बाकी रह्यो भने राज्यको ढुकुटी सुकुटी बनाउँछन् औषधी गर्न विदेश गएर‘। त्यसैले पनि यस्तो सम्मान–अभिनन्दनमा मालाले किचेर नमरून् भनी बबुरा जनताले पशुपति गुहार्नुपर्ने । यति ठुला मालाको डोरीचाहिँ पुल बनाउने फलामे लठ्ठा नै हो कि ! नत्र टन कसरी पुग्छ ! हुन त कसैले जोख्ने हैन जति भनिदिए नि भैगो‘। हनुमानले विरोध गर्ने कुरै आएन, रामले गरे भने ठोकठाक गरेर ठेगान लाइदिए सक्किगो । यस्तो सम्मान–अभिनन्दन गर्न लायक कोही नेतानेती भएका भए देशको हालत यस्तै हुन्थ्यो र ! तर‘ ।
यतिखेर बहुप्रचलित फेसबुके सम्मान–अभिनन्दनको त बयान गरी साध्यै छैन । फेसबुकमा गोडा दुएक गजल–फजल पोस्ट र्गयो, यसो चिने जानेका दुई चार जनालाई लाइक, कमेन्ट गरिदिनु भनी प्यासेन्जरमा खबर पठायो । त्यसको केही पछि फलानो संस्थाबाट सम्मानित–अभिनन्दित भनी माला लाएको फोटो पोस्ट गरिहाल्यो ‘। उस्तै परे त्यो संस्थाको अध्यक्ष पनि आफैँ हुन बेर छैन । फोटो कमेन्ट गरिदिए बापत पुरस्कार दिने, सम्मान–अभिनन्दन गर्ने भन्ने सूचनासमेत आउन थालिसक्यो !
आजकाल कुनै जनावर वा मनुवाको जमात देख्ने बित्तिकै त्यहाँ सम्मान–अभिनन्दन कार्यक्रम रहेछ भन्ने लागी आँखा त्यतैतिर सोझिहाल्छ । सम्मान सूचक मालाको स्तर पनि घटेर कागजी फुलमा सीमित हुन पुगेको छ । कसैलाई चाहिए मकहाँ कागजी फुल जत्ति छ, सम्पर्क गर्नु भए हुन्छ । यो माला भन्ने वस्तु सबभन्दा पहिले कसले बनायो होला त्यसलाई मरणोपरान्त सम्मान–अभिनन्दन नगरी नहुने भो‘ ।
आजको उत्तर आधुनिक जमानामा सुटुक्क पैसा लिएर एकल वा सार्वजनिक सम्मान–अभिनन्दन गर्नु–गराउनु भन्दा एउटा सम्मान–अभिनन्दन ब्युरो स्थापना गरी निर्धा्रित रकम लिएर त्यसै ब्युरोमार्फत सम्मान गराई सम्मानलाई लिगलाइज गर्नु राम्रो हुन्छ । वास्तवमा यस्तो सम्मान ब्युरोमार्फत पूर्वेली–पश्चिमेली, आवासीय–गैरआवासीय, अकुत धनराशि जोड्न सक्षम–अक्षम, जग्गावाल–मोही आदि जजसलाई जुन दिन मन लाग्यो त्यस दिन सम्मान गर्न सजिलो पनि हुन्छ । अहिलेका पेसेवर सम्मान–अभिनन्दन गर्ने–गराउनेहरूले इलिगल रूपमा नगरी लिगलाइज गर्नेतर्फ तु. कदम चाल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अब मान्छेका तहमा सार्वजनिक बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई समातेर चन्दा असुली माला लगाइदिएर तथा पशुका तहमा गु खाइदिए बापत सुँगुरलाई, भारी बोकी दिए बापत गधालाई, मुसा खाई दिए बापत बिरालालाई, मो मो दिए बापत रागारागीलाई मात्र सम्मान–अभिनन्दन गर्न बाकी छ । यो बाकी कार्य पनि धेरै दिन बाकी नराखी विश्वमै सम्मान–अभिनन्दन गरिने देशहरूका कोटिमा नेपाललाई अग्र पङ्क्तिमा र्पुयाएर अन्तर्र्रा्ष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरी राष्ट्रिय गौरव बढाउन पनि ढिलाइ नगर्ने हो कि ?